गोरो र सुन्दर हुन चाहनुहुन्छ ? यी खानेकुरा खानुहोस | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalगोरो र सुन्दर हुन चाहनुहुन्छ ? यी खानेकुरा खानुहोस
Home स्वास्थ्य गोरो र सुन्दर हुन चाहनुहुन्छ ? यी खानेकुरा खानुहोस
गोरो र सुन्दर हुन जो कोही पनि चाहन्छ । आफू गोरो र सुन्दर भएर तारिफ बटुल्न सबैको ईच्छा हुन्छ । अझ सौन्दर्यको मामिलामा पुरुष भन्दा महिला बढी चिन्तित हुने हुन्छन् । दिनभरको धुवा धुलो र खानपानमा ध्यान नदिदा तपाईको अनुहार झन नराम्रो हुने हुन्छ ।
महिलाहरु आफू गोरो र सुन्दर देखिन हरेक उपायहरु अपनाउँछन् धेरै मंहगो-मंहगो कस्मेटिक साधनको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् तर यस्ता केही कस्मेटिकले महिलाहरुलाई निराशा मात्र दिईरहेको हुन्छ । केही खानेकुराहरु यस्ता छन् जसबाट आफ्नो छालामा अझ बढी चमकता ल्याउछ र तपाईलाई गोरो बनाउँछ । ति खानेकुराहरु दैनिक रुपमा खाने गर्दा हामीलाई गोरो हुन मदत गर्दछ ।
ति खानेकुरा के–के हुन् ?
टमाटर : टमाटरमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट्सले घामको असर छालामा हुन दिँदैन । जसका कारण छालाको चमक बढ्दै जान्छ ।
केरा : केरा हाम्रो स्वस्थ्यको लागि एकदमै फाईदाजनक फल हो । केरा खानाले हामीलाई धेरै फाईदा गर्दा हालै गरेको एक अध्यानले देखाएको छ केरामा हुने पोटाशियम र भिटामीन ई ले छालाको रंग निखार्छ जसले गर्दा हाम्रो अनुहार गोरो बनाउछ ।
कागती पानी : हरेक दिन कागती पानी खानाले यसमा हुने भिटामीन सी ले हामीलाई कालो हुनबाट बचाउँछ ।
रातो मूला : दैनिक रातो मूला खानुहोस यसमा हुने आईरनले तपाईहरुको अनुहारमा निखार ल्याउँछ ।
कालो चिया: तपाईलाई थाहा छैन् होला कालो चिया खानाले पनि हामीलाई गारो बनाउछ भन्नेकुरा यसमा हुने पोलीफेनालसले अनुहारको चमक बढाउँछ ।
मेवा : अनुहारलाई गोरो बनाउने अर्को महत्वपूर्ण फल हो मेवा, मेवामा हुो पपाईनले फेयरनेस बढाउँछ ।
दुध : त्यस्तै दुध पनि एक बहुउपयोगी बस्तु हो । यसमा हुने भिटामीन सी र जिंकले हामीलाई गोरो बनाउँछ । याद राख्नुहोस् क्यल्सीयको लागि मात्र नभएर अनुहारलाई सधै चम्किलो बनाई राख्नको लागि भए पनि सधै दुध खाने गर्नु होस ।
नरिवल पानी : नरिवल पानीले मानिसलाई बलियो बनाउछ भन्ने मान्छेको मान्यता पहिले देखिनै थियो तर एक अध्यनले भनेको छ यसमा हुने ईलेक्ट्रोलाईट्सले मानिसलाई गोरो हुन पनि मद्दत गर्छ ।